Budata Flashnote maka Windows
Free Budata maka Windows (2.39 MB)
Flashnote bụ usoro ederede dị mfe ma dị mfe nke ndị ọrụ nwere ike iji jikwaa ọrụ ha kwa ụbọchị.
Ihe omume a nke na-arụ ọrụ nwụnye ahụ dị mfe, mgbe ị na-agba ọsọ mmemme ahụ maka oge mbụ, ọ ga-ewere ọnọdụ ya na sistemụ sistemụ yana ọ ga-ezu iji pịa akara ngosi mmemme na sistemụ sistemụ iji ruo isi window nke usoro ihe omume.
Ihe omume a, nke di nfe iji, nke ndi komputa komputa niile. Notu oge ahụ, Flashnote nwere interface njirimara dị mfe ma hazie nke ọma.
Mgbe ịchọrọ ịmepụta ihe ngosi ọhụụ na mmemme ahụ, nke nwekwara nkwado asụsụ English, o zuru iji pịa bọtịnụ Tinye Nkọwa Ọhụrụ. Mgbe ahụ ị nwere ike ịchekwa ihe edeturu gị site na itinye aha na ndetu gị. Site nusoro ihe omume ahụ, nke na - enye gị ohere ịmepụta ndetu site na ịnakọta ihe edeturu gị nokpuru isiokwu dị iche iche, ị nwere ike ịgbaso ọrụ ọ bụla ịchọrọ ịme kwa ụbọchị site na ịdekọ ihe.
Usoro ihe omume ahụ, nke na - enye gị ohere ịchọ site na ndetu gị, na - enyekwa ọtụtụ ịhazi onwe na ịmegharị nhọrọ maka ndị ọrụ. Notu oge ahụ, mmemme ahụ, nke nwere ọtụtụ atụmatụ ị nwere ike iji site na enyemaka nke ụzọ mkpirisi igodo ụzọ, dị oke mkpa.
Ihe omume a, nke nagba ọsọ nenweghị ike gwụ usoro, nwere ụzọ dịkarịsịrị nta maka iji CPU na RAM eme ihe. Noge ule m na Flashnote, nke nwere ezigbo oge nzaghachi, ezuteghị m nsị ọ bụla, oyi ma ọ bụ nsogbu ọ bụla.
Ọ bụrụ na ịchọrọ mmemme ebe ị nwere ike ịgbaso ọrụ ị na-arụ kwa ụbọchị site na ịme obere ndetu, ana m akwado gị ka ị nwaa Flashnote.
Nha faịlụ: 2.39 MB